[OFISIALY] SIM hamaha Service - hamaha findainao ny karatra SIM amin'ny dingana 3
dr.fone Toolkit - SIM hamaha Service
Hamaha ny telefaonina tamin'ny 3 dingana tsotra!
Fast, azo antoka sy maharitra
1000+ finday nanohana, manohana mpanome tolotra tambajotra 100+
60+ firenena nanohana
Select ny Phone
Ny kely saina, fifadian-kanina, azo antoka sy ara-dalàna fomba hamaha ny findainao.
dia tsy maintsy hamerina ny dingana. Afaka ny telefaonina vaovao farany ny rindrambaiko ho ara-dalàna sy mampiasa izany eo amin'ny tambajotra misy eto amin'izao tontolo izao.
Ny mamoha toromarika hiasa ho blacklisted finday, fa ao an-tsaina foana fa mamoha ny telefaonina tsy hanesorako azy tsy ho amin'ny blacklist. Efa efa blacklisted findainao? Jereo eto
Ao amin'ny fisehoan-javatra tsy fahita firy isika dia tsy afaka hamaha ny telefaonina na inona na inona antony eo ambany ny andraikitsika, dia hamoaka anareo ho feno refund.
Ho afaka mampiasa ny findainao amin'ny tambajotra mpamatsy misy eto amin'izao tontolo izao.
Io no fomba maharitra, ary tsy mandika ny fiantohana ny findainao.
Vonjeo ny fotoana
Ny telefaonina na oviana na oviana dia tsy maintsy hamela ny lafiny. Tohizo ny fampiasana ny finday nandritra ny dingana mamoha.
Safidio ny telefaonina, ary fenoy ny fangatahana endrika.
Raiso ny mamoha fehezan-dalàna amin'ny alalan'ny e-mail.
Soraty mamoha fango ao an-telefaonina
Jereo ny mba sata
Hamaha ny Phone
Tsindrio ny marika famantarana ny hifidy ny findainao, Fenoy ny fangatahana endrika ary handray ny dingana-by-dingana toromarika mamoha ny e-mail.?Once no nanaraka ny toromarika tsotra findainao dia nanokatra avy hatrany, ary vonona ny hampiasa akory va tambajotra mpamatsy.
Complete firenena sy mpanome tolotra tambajotra fifampifanarahana mifamadika
FAQ - Phone mamoha
+ Ahoana no hamaha ny findaiko amin'ny Dr.Fone - SIM hamaha Service?
Mba hamaha ny finday amin'ny Dr.Fone - SIM hamaha Service, mifidy ny ka hanao, modely, firenena sy mpamatsy Network ny finday dia mihidy ny. Raha vao mandray vola, ny fangatahanao dia ho ampiasaina sy ao anatin'ny fotoana fanaterana ny antoka dia hahazo tsotra dingana-by-dingana toromarika amin'ny alalan'ny e-mail amin'ny fomba hamaha ny findainao.
Raha toa ka mila fanampiana na oviana na fotoana mandritra ny mamoha antsika amin'ny alalan'ny dingana mifandray amin'ny chat, telefaonina, na tao amin'ny media sosialy.
+ Ohatrinona no vidin'izany ny hamaha ny findaiko?
Ny vidin'ny iray mamoha fehezan-miovaova arakaraka ny anton-javatra maromaro. Ny tena vidiny no miseho rehefa mifidy ny ka hanao, modely, firenena sy mpamatsy Network ny finday dia mihidy ny. Ary koa ny fandraisana fihenam-bidy ho an'ny tsirairay mamoha, dia efa misy koa ny fihenam-bidy hatramin'ny 50% eo amin'ny tranonkala.
+ No mamoha maharitra sy azo ampiharina any ivelany?
Eny. Raha vao efa nanokatra ny finday amin'ny SIM hamaha asa fanompoana izay tsy maintsy hamerina ny dingana. Afaka ny telefaonina vaovao farany ny rindrambaiko ho ara-dalàna sy mampiasa izany eo amin'ny tambajotra misy eto amin'izao tontolo izao.
+ Mandra-pahoviana no atao mba hamaha ny findaiko?
Ny azo antoka dia miankina amin'ny ny fotoana fanaterana ny firenena sy ny tambajotra mpamatsy ny telefaonina dia mihidy ny. Tamin'ity indray mitoraka ity toe, ary koa ny lahateny eo ho eo ny fotoana mitovy unlockings, dia aseho amin'ny efijery rehefa efa feno ao amin'ny fangatahana endrika.